Orinasa sy mpanamboatra finday any China | SJJ
Fanintonana an-tariby, tadin-telefaona, tady tadiavin'ny telefaona izay tadiavinao, azonao antoka fa ho hitanao ao amin'ny ozininay izany. Hita amin'ny fitaovana, famaranana, loko ary kojakoja samihafa.
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana tadin-telefaona finday izahay ary manondrana an'izao tontolo izao mandritra ny am-polony taona maro, ilay noforoninay tamina faritra maro be, misy habe, endriny ary fomba maro samihafa. Manolotra endrika manokana fehin-telefaona finday avo lenta ho an'ny mpanjifa manerantany isika, na endrika mahazatra na lamaody afaka manampy anao izahay hamita azy. Manolotra safidy Pantone Color Chart sy kojakoja ho anao izahay hamoronana tadin-telefaona anao manokana.
Ny tadin-telefaona finday dia mety amin'ny telefaona finday, mpilalao mp3 / 4, fakan-tsary, keychain ary fitaovana hafa, izay misy lavaka na loop. Tady maharitra sy milamina izay azonao ahantona amin'ny tananao, manakana ny fitaovanao tsy hianjera tsy nahy ary hitandrina ny fitaovanao rehefa mampiasa azy io, avelao koa ny ankihiben-dry zareo hitety sisiny, azonao atao ny mametraka azy ireo haingana sy mora. Betsaka ny karazana ody firavaka azo alaina, toy ny endri-tsoratra kely misy sarivongana, firavaka kristaly vita amin'ny rhinestone, ary firavaka biby kely amin'ny fitaovana samihafa. Misy koa ny ody firehitra sasany mety manjelatra na mihiratra rehefa mandeha ny telefaona. Firavaka maro ihany koa no manana lakolosy kely mifangaro na tarehintsoratra avy amin'ny franchise malaza farany, toy ny kintana malaza na horonan-tsary mafana na dia ny lalao aza, fa mety ho safidy tsara ho an'ny lehilahy sy vehivavy ho an'ny haingon-trano ary miavaka amin'ny fiainany, misy koa firma vitsivitsy izay azon'ny olona apetraka amin'ny rantsan-tànana hanadiovana ny fisehon'ilay fitaovana. Ka na inona na inona hevitrao dia miarahaba anao hizara aminay ary hataonay tena izy.
Fitaovana: PVC malefaka, Silicone, hoditra, namana eko ary tsy misy poizina
Fomba: Fomba isan-karazany safidinao na fanaingoana ny volavolanao tsy manam-paharoa.
Fitaovana: Tady finday, peratra endrika D, rivet, clip amboarina ary peratra mitsambikina 2.
Ny tadin-telefaona dia mafana ary tsara ho an'ny orinasa, fampiroboroboana, dokam-barotra, fahatsiarovana, fanatanjahan-tena ary hetsika.
Teo aloha: Kitapo pensilihazo sy tranga pensilihazo
Manaraka: Mpanadio efijery telefaona